ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များတာ လက္ခဏာ (၁ဝ) ခု – MyHealth Myanmar
ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များတာ လက္ခဏာ (၁ဝ) ခု
1. Stomach Ache ဗိုက်နာ
ကလေးငိုရင် နို့ဆာတာ၊ လေနာတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ကလေးနဲနဲကြီးရင် သံကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ လေကြောင့်နာရင် ခါးကော့ ငိုမယ်။ Colic ဗိုက်ရစ်နာတာ၊ Gastroesophageal reflux အစောခြေရည်အထက်ဆန်တာ၊ Food intolerance အစာကို လက်သင့်မခံနိုင်တာ၊ Virus ဗိုင်းရပ်စ်တွေကနေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ အန်တာ၊ ဖျားတာ၊ ဝမ်းပျက်တာတွေနဲ့ ရောရင် ဆရာဝန်ပြပါ။
ကလေးငယ်ငယ်လေးတွေ နဲနဲကိုယ်ပူတာကိုတောင်မှ သတိထားရမယ်။ နားကိုက်တာ၊ ချောင်းဆိုးတာ၊ မဆော့ချင်-မလှုပ်ချင် ဖြစ်တာ၊ အနီစက်တွေထွက်တာ၊ အန်တာ၊ ဝမ်းလျှောတာတွေ ရှိနေ-မနေစစ်ဆေးပါ။
ကလေးဆိုတာ ဆီးတရွှဲရွှဲ ဝမ်းတစိုစိုနေတယ်။ ဝမ်းပျက်သလိုဘဲ ချုပ်နေတာလဲ မကောင်းဘူး။ စိတ်ပူစရာ သိပ်မလိုပါ။ တကယ်ဝမ်းက မာနေပြီး သွားမရရင် ရေပိုတိုက်ပေးပါ၊ အသီးရည်တိုက်ပါ။ မရရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ ဗိုက်နာနေပြီး အန်လာရင်တော့ အရေးကြီးတယ်။
ကလေးအသားအရေက သိပ်နူးညံတယ်။ အထိမခံသလိုနေသေးတယ်။ မသင့်တာတွေများတယ်။ Diaper rash (ဒိုင်ယာဘာ) ကနေလဲ ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ Eczema နှင်းခူနာမဖြစ်အောင် ဆပ်ပြာပြင်းတာ မသုံးပါနဲ့။ ခေါင်းလျှော်ရည် ပြင်းတာမသုံးပါနဲ့။ ပေါင်ဒါရိုးရိုးသာသုံးပါ။ အရေပြား ခြောက်မနေစေပါနဲ့။
ကလေးတွေချောင်းဆိုးတာ အသံအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ Seal-like barking cough ဖျံတွေလို အသံထွက်တာကို Croup ခေါ်တယ်။ နဲနဲကိုယ်ပူပြီးချောင်းဆိုရင် အအေးမိတာဖြစ်နိုင်တယ်။ အပူချိန်များရင် နူမိုးနီးယား သတိထားပါ။ တုပ်ကွေးလဲ အတော်ပူတယ်။ Wheezing စီစီ၊ စီစီ အသံကြားရင် ပန်းတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ပိုးဝင်တာကလဲဖြစ်တယ်။ Pertussis ကြက်ညှာချောင်းကို Whooping sound အသံထွက်တယ်။ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးကို ကလေး ၄ နှစ်အောက်ကို ဆရာဝန် မညွှန်ဘဲ မပေးသင့်ပါ။
ကလေးတွေမှာ ဖြစ်တာအများဆုံးလို့ ပြောနိုင်တယ်။ Infection ရောဂါပိုးဝင်လို့၊ Food intolerance အစာကို ကိုယ်က လက်သင့်မခံနိုင်လို့၊ Fruit juice ဖျော်ရည်တွေ သောက်တာများလို့ ဆိုတာတွေကြောင့် ကလေးတွေမှာ ဝမ်းပျက်နိုင်တယ်။ ဝမ်းရပ်တဲ့အထိ ကလေးကို အိမ်မှာသာနေစေပါ။ ရေဓါတ်၊ ဆားဓါတ်ဖြည့်ပေးပါ။ နို့-နို့ထွက်အစာတွေ၊ ဖိုင်ဘာများတာတွေ၊ အဆီများတာတွေ မကျွေးသေးပါနဲ့။ မပျောက်ရင်၊ ဆရာဝန်ခေါ်ပါ။ အဖျား 101.4 ကျော်ရင်၊ အန်ရင်၊ ဝမ်းထဲသွေးပါရင်၊ ဝမ်းမဲနက်နေရင်၊ ဗိုက်နာရင်၊ ၂၄ နာရီနဲ့ မသက်သာရင် ဆရာဝန်ပြပါ။
၆ လလောက်မှာ ငယ်သွား စပေါက်တယ်။ ကလေးက အနေရထက်မယ်။ Rubber teething ring ကိုက်စရာ ပေးထားနိုင်တယ်။
Burping, crying, and flatulence အသံစူးစူနဲ့ ငိုမယ်၊ လေလဲတက်မယ်ဆိုရင် လေနာတာဖြစ်မယ်။ Colic နဲ့မတူဘူး။ (ကိုးလစ်) ဖြစ်တာက ချော့မရဘူး။
ကလေး မအေးမိရင် နှာရည်ယိုမယ်။ အသက် ၄ နှစ်အောက် ဆေးဆိုင်က အလွယ်ဝယ်ရတဲ့ဆေး ဆရာဝန်မမေးဘဲ မတိုက်ပါနဲ့။ Saline drops ဆားရည်အစက်ချဆေး သုံးတာ စိတ်ချရတယ်။ Mucus အချွဲတွေကျဲစေမယ်။ Bulb syringe နဲ့ စုပ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်။ Vaporizer ဖွင့်ထားပေးပါ။
10. Keeping Calm ကလေးချော့ပါ
ကလေးချော့မဲ့ မိဘတွေက အရင် စိတ်အေးလက်သာရှိပါစေ။ ငါ့မှာ အစွမ်းအစရှိတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုထားပါ။ နောက်ဆုံး မရရင် ဆရာဝန်ခေါ်လို့ရတာဘဲလို့ သိထားပါ။
Dr Tint Swe2021-11-09T11:14:38+06:30January 7th, 2018|Family & Pregnancy, General Knowledge, Health|